Lending Circles तपाईंको समुदायलाई सशक्त पार्न उत्तम तरिका हो।
तपाईंको समुदायमा Lending Circles ल्याउनुहोस्
Lending Circles ले सहभागीहरूलाई सकरात्मक क्रेडिट इतिहास स्थापना गर्न, वित्तीय लक्ष्यमा बचत गर्न, र स्वस्थ वित्तीय बानी विकास गर्न मद्दत गर्दछ।
सामाजिक loansणले अहिले र भविष्यमा दुबैलाई किफायती क्रेडिट विकल्पहरूमा अझ राम्रो पहुँचको साथ सहभागीहरूलाई प्रदान गर्दछ।
सहभागीहरूले उनीहरूको क्रेडिट स्कोर बढाउँछन्, जुन सभ्य अपार्टमेन्ट भाडामा लिन, सस्तो कार carण लिनको लागि वा आपतकालीन खर्चहरू कभर गर्न महत्वपूर्ण छ।
सहभागीहरूले कसरी उनीहरूको लागि बैंकि system प्रणाली कार्य गर्ने र उनीहरूको व्यक्तिगत वित्तीय नियन्त्रणको नियन्त्रण कसरी गर्ने सिक्छन्।
“म मेरो परिवारको समृद्ध खाद्य परम्परा जारी राख्न चाहान्छु। Lending Circles ले मलाई यो गर्न विश्वास दिलायो। ”
भेरोनिका, लार्क्सपुर, CA
हामी कसरी सफलताको लागि प्रदायक सेट अप
सजीलो अनलाइन भिडियो ट्यूटोरियल र उपकरणहरूले तपाइँ कसरी तपाइँको आफ्नै ग्राहकहरु संग ndingण घेरा सर्कल कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी लाई द्रुत रूपमा मद्दत गर्दछ।
हाम्रो वेबसाइट र सुव्यवस्थित आउटरीच उपकरणहरूले तपाइँलाई सबै समर्थन प्रदान गर्दछ तपाइँ नयाँ ग्राहकहरू भर्ना गर्न आवश्यक छ।
सामाजिक inणमा सहभागीहरू भर्ना गर्नुहोस्
ग्राहक प्रदर्शन प्रदर्शन र हेर्नुहोस्
उत्तम अभ्यासहरूको खोजीयोग्य FAQ हरू पहुँच गर्नुहोस्
हाम्रो शक्तिशाली क्लाउड-आधारित डेटाबेसले तपाईंलाई सहभागीहरू भर्ना गर्न र loanण प्रदर्शनमा अप टु डेट रहन सजिलो बनाउँदछ। तपाईं पनि राम्रो अभ्यासहरूको लागि प्रायः सोधिने खोजी गर्न वा हाम्रो प्रदायक सेवा टोलीबाट वास्तविक-समय समर्थन अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ
Servण सेवा र क्रेडिट रिपोर्टिंग
Mission Asset Fund ले servण सेवा र क्रेडिट रिपोर्टिंगको सबै विवरणहरूको ख्याल राख्छ ताकि तपाईं आफ्नो ग्राहकहरूलाई ठूलो सेवा दिन ध्यान दिन सक्नुहुन्छ!
अद्भुत प्रदायक समर्थन
तपाईंको कर्मचारीहरूको हप्तामा पाँच दिन हाम्रो पेशेवर १TP4T प्रदायक टोलीमा पहुँच हुनेछ।
हामीले सान फ्रान्सिस्कोको मिशन छिमेकीमा शुरू गरेका थियौं। अब हामी देश भर विस्तार गर्दैछौं।
हामी एक अद्वितीय गैर नाफामुखी छन् जो आर्थिक अवसरको लागि वित्तीय छायाँबाट बाहिर मार्गहरू सिर्जना गर्नमा विश्वास गर्दछन्, नयाँ अमेरिकीहरूलाई आकांक्षी, र सुरक्षित आवासको लागि। समुदायहरूको लुकेका बलहरूको प्रयोग गरेर, हामी मेहनती परिवारहरूको लागि उचित बजार सिर्जना गर्न कार्य गर्दछौं। हामी हाम्रो Lending Circles कार्यक्रमहरू मार्फत कम लागतको creditणमा पहुँच वृद्धि गर्छौं, वित्तीय शिक्षा र व्यवस्थापन प्रबर्धन गर्छौं, र कम आय भएका उपभोक्ताहरूको लागि समावेशीकरणलाई बढावा दिने नीतिहरूको लागि वकालत गर्दछौं।
Rण कम गरियो
धेरै सहभागीहरूले उच्च costण higherण तिर्न सामाजिक loansण प्रयोग गर्छन्।
सहभागीहरूले आफ्नो क्रेडिट चाँडै र प्रभावकारी बनाउँछन्।
चासो र फीस बचत गरियो
औसत $360 प्रति interestण ब्याज मा बचत।
(वैकल्पिक loanण उत्पादनको आधारित ब्याज)
सहभागीहरूले additionalणका थप lines थप लाइनहरू पहुँच गरेका थिए।
एक Lending Circles प्रदायक बन्नुहोस्
1०१ (c) ()) नाफा नकमाउने संगठनहरू जसले कम आय भएका समुदायहरूलाई सीधा सेवाहरू प्रदान गर्दछन् Lending Circles प्रदायक बन्नको लागि आवेदन दिन योग्य छन्। के यो आवाज तपाईंको संगठन जस्तो छ?
यस फारमलाई पूर्ण गरेर अब सुरू गर्नुहोस्
Simple साधारण चरणहरू:
हामीलाई थाहा दिनुहोस् कि तपाइँ इच्छुक हुनुहुन्छ यो फारम पूरा गर्दै र हाम्रो एक को लागी दर्ता गर्दै आगामी वेबिनारहरू.
त्यसपछि हामी तपाईंलाई आवेदन दिन आमन्त्रित पठाउनेछौं। अनुप्रयोग प्रक्रिया सरल छ र हामीलाई कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्न मद्दत गर्दछ, Lending Circles एक राम्रो फिट हो, र एक अनुमानित लागत।
सँगै, हामी एक कार्यान्वयन सम्झौतामा पुग्छौं र लागतलाई अंतिम रूप दिन्छौं। चिन्ता नलिनुहोस् यदि कोष एक चिन्ता हो। हामीसँग केहि विचारहरू छन् जुन मद्दत गर्न सक्दछ (तपाईंको कार्यकारी निर्देशक वा सीईओ यस चरणमा संलग्न हुनुपर्दछ)।
त्यसोभए रमाइलो हुन्छ! हामी तपाईंलाई हाम्रा अद्भुत उपकरणहरूको साथ सेटअप गराउँदछौं र हामी तपाईंको समुदायमा सफलतापूर्वक Lending Circles कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सबै प्रशिक्षणहरू आपूर्ति गर्नेछौं।
तपाईंको समुदायमा Lending Circles ल्याउनुहोस्:
हामीलाई ईमेल गर्नुहोस् [email protected]ionassetfund.org
हामी जहिले पनि सुन्दै छौं।